बिहीबार भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, सावधान ! नसोचेको हुनसक्छ … – Sandesh Press
October 7, 2021 530
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार गुरुवार अर्थात् बिहीवार (गुरुवार) लाई भगवान नारायण अर्थात् बिष्णुको विशेष दिनको रुपमा समेत पुजा गर्ने गरिन्छ। मान्यताका अनुसार बृहस्पति ग्रह अन्य ग्रह भन्दा भारि हुने भएकाले पनि बृहस्पति अर्थात् बिहीवारलाइ विशेष मान्य गरिन्छ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार गुरुवार यी काम गरेमा तपाइको बच्चा र पतिको आयु घट्न सक्छ वा ठुलो दुर्घटना हुन् सक्छ। महिलाको जन्मकुण्डलीमा बृहस्पति पति र बच्चाको कारक हुने गर्दछन ।जसका कारण गुरु ग्रह संतान र पति दुबैको जीवनलाई प्रभाबित पर्न सक्छ।
कुन बार के गर्नु शुभ र के गर्नु अशुभ हुन्छ भन्ने बारेमा धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार कुरा गर्ने हो भने आज बिहिबारको दिन गरिने धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ ।
ब्रह्माण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने बृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर बिहीबार यी काम गर्न भने निषेध गरिएको छ।
बिहीबारको दिन नगर्नुस यी काम
– गुरु ग्रहलाई जीव पनि भन्ने गरिन्छ। गुरुवार नङ र दाह्री काट्नाले घरको पुरुषको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
– महिलाले यदी सो दिन कपाल धोएमा वा कपाल काटेमा बृहस्पति कमजोर हुन्छ र पति, सन्तानको प्रगतिमा रुकावट आउँन सक्छ।
-कपाल नकाट्ने, साबुनले कपाल नधुने।
-गुरुवारको दिन लक्ष्मी-नारायणको एक साथ पूजा गर्नाले जीवनमा खुसी र पति-पत्नी बिचको दुरी कम हुन्छ र धनमा वृद्ध‍ि हुन्छ।
बिहीबार गर्नै हुँदैन यी कामजैविक कारणले पनि महिलाको स्वास्थ्य पुरुषको तुलनामा अलि बढी संवेदनशील हुन्छ । जसका कारण पुरुषमा भन्दा केही बढी स्वास्थ्य समस्या महिलामा देखिने गर्छ ।
यसमा पनि प्रजनन उमेर समूहका महिलालाई सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्याले सताई नै रहन्छ । यी हुन् महिलामा देखिने पाठेघरसम्बन्धी केही स्वास्थ्य समस्या :
महिलामा देखिने प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघर झर्ने एक हो । विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा यस्तो समस्या बढी मात्रामा देखिने गर्छ ।
सन्तान जन्माएका, उमेर नपुगी गर्भवती भएका, सुत्केरी भएको ६ हप्ताभन्दा अगाडि नै जटिल शारीरिक काम गर्दा, गर्भवतीको अवस्थामा पौष्टिक आहार नलिँदा यस्तो समस्याले सताउने गर्छ ।
महिलामा देखिने अर्को जटिल समस्या भनेको पाठेघरमा ट्युमर पनि हो । शरीरमा हर्मोनको मात्रा बढी भएमा यस्तो ट्युमरको समस्या हुने गर्छ ।
यो एउटा आनुवंशिक समस्या पनि हो । परिवार नियोजनको साधनका रूपमा डिपो सुई लिने महिलामा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
नेपालका महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ। यतिसम्म कि महिलामा देखिएको क्यान्सरमा सबैभन्दा बढी यसैको समस्या भएको पाइन्छ।
उमेर नपुग्दै विवाह भएका, यौनसम्पर्क राखेका, धेरै पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, धेरै सन्तान जन्माउने महिलामा यस्तो क्यान्सर हुन सक्छ।
त्यस्तै, खानपिनमा ध्यान नदिने, अत्यधिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने, पिल्स खाने महिलालाई पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ । पाठेघरको क्यान्सर भए-नभएको कुरा प्याप स्मेरबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ।
Prevविवाहित महिलाप्रति पुरुष आकर्षित हुनुको यस्तो छ कारणहरु !
Nextमाता लक्ष्मीका अति नै प्रिय हुन्छन् यी महिनामा जन्मिएका महिला, तपाईको कुन महिना ?